Deedoke: ဒီးဒုတ် Anniversary
ကျွန်တော့်အသက်မဟုတ်ပါဘူး... ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒီးဒုတ်ဘလော့ဂ် သက်တမ်းတစ်နှစ်လွန်မြောက်သွာားတာကိုဆိုလိုတာပါ။
ဘာတွေရေးခဲ့ ဘယ်လိုပို့စ်တွေတင်ခဲ့မိတာကိုတော့(အားလုံးကို)ရေရေရာရာမမှတ်မိဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာ ဖတ်မိ၊မြင်မိ၊ကြားမိ၊ခံစားမိတာတွေကို ပြန်လည်တွေးမိရေးမိ ဝေငှဖြစ်တယ်။ ဘယ်သူကိုမှထိခိုက်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေမပါဘူး လို့တော့ယူဆမိပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့သော ၇-ရက်သားသမီးတွေကိုစိတ်ဆင်းရဲစေသူများကတော့ ကြိုက်ချင်မှကြိုက်မယ့်အရေးအသားကလေးတွေတော့ပါကောင်းပါနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာ (Blogosphere) ဘလိုဂိုစဖီးယားမှာ လူဦးရေသိသိသာသာတိုးတက်လာတယ်။ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုပြီး အခမ်းအနားတွေ တွေ့ဆုံမှုတွေလုပ်ကြတာသိရသဗျား။ (ကောင်းလေစွ)၂
ကျွန်တော်ဒီးဒုတ်ကတော့ ဒီးဒုတ်တို့ထုံးနှလုံးမူပြီး အသာလေးနှပ်နေ...လူမသိသူမသိ ကာလအချိန်လောက်ဘဲ ကိုယ်လုပ်စရာကိုယ်လုပ်...ပြီးတော့ ပြန်နှပ်နေလိုက်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အခုလို Alternative society တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက် ဘယ်လိုပယောဂကြောင့်မှ ဒီနေရာဒေသလေး မပျက်စီးမပျောက်ကွယ်သွားစေချင်ဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပုဂ္ဂလခံစားချက်ကတော့
ကိုယ့်ရဲ့ online privacy ကိုတတ်နိုင်သလောက်ထိန်းသိမ်းထားချင်တယ်။ ဒီကာလအတောအတွင်း မြင်တွေ့ရတာကအချို့ဘလော့ဂ်တွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်ခံရ၊ ကိုယ့်အပေါင်းအသင်းတွေရဲ့လင့်ခ်တွေဖြုတ်ပစ်ရ၊ ကိုယ်ပါဝင်နေကြနေရာတွေကထွက်ခွာ၊ခွဲခွာသွားရ။...သူငယ်ချင်းတွေရေ...
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်...တစ်နေ့တစ်ချိန်မှာတော့ ဒီဝန်းကျင်ဒေသမှာ အတားအဆီး အနှောင့်အယှက်လွတ်ကင်းတဲ့ လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ လူ့လောကသစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပြီး တွေ့ဆုံပျော်ရွှင်ခွင့်ရချင်တယ်။...မြန်မာဘလော့ဂါများ ကောင်းကျိုးလိုအင်ဆန္ဒပြည့်စုံစေသတည်း..
Posted by ဒီးဒုတ် at 9/18/2007 10:00:00 AM
တစ်နှစ်ပြည့်မှသည် နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ဆန္ဒရှိသမျှ၊ စိတ်ကူးရှိသမျှ ၊ ခံစားရသမျှတွေကို ဆက်လက်ရေးသာနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Myanmar friends, I'm argentine sport journalist and I'm looking foraMyanmar football blog. If you know one, please, write to contact the blogger.
More Burmese volunteers are welcome
Abidan lay - 1 second - http://tr.im/dictext
အခုဆောင်းပါးနဲ့ တိုက်ရိုက်တော့ မသက်ဆိုင်ပါဘူး။ အနှောင့်အယှက်ပေးမိရင် ခွှင့်လွှတ်ပါလို့ ကြိုတင်ပြီး တောင်းပန်ပါတယ်။ အနောက်ဖက်မှာ ပြည်သူတွေဟာ ကာကွယ်ဆေးကို ယုံကြည်မှုမရှိကြပါဘူး။ ကာကွယ်ဆေးကြောင့် ကလေးငယ်တွေဟာ ဥာဏ်ရည်နိမ့်ပါးမှု၊ ရောဂါရရှိမှုနဲ့ သေကျေတာတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ depopulation လို့ခေါ်တဲ့ လူတွေကို အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖို့ စဉ်းစားနေတဲ့ကိစ္စကို မြန်မာတွေ သတိထားဖို့ အချိန်တန်ပြီလို့လည်း ယူဆမိပါတယ်။ လောဘကြီး.. အတ္တကြီးနေတဲ့ စီးပွားရေးသမားနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေစုပေါင်းပြီး လူတွေကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ သတ်ဖို့ကြံစည်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ Bill Gates လိုသူဌေးကြီးဟာ ကျန်းမာရေးစံနစ်ကို အသုံးပြုပြီး လူတွေကို သတ်ဖြတ်ဖို့ လူသိရှင်ကြား ပြောကြားနေပါပြီ။ အောက်ဘက်မှာတော့ သူပြောခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုကို အထောက်အထားအဖြစ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
STRAIGHT UP DEPOPULATION QUOTES FROM THE GLOBAL ELITE:
☀ Bill Gates EXPOSED! Wants Depopulation Through Vaccines!
☀ Doctor Admits Vaccine Is More Deadly Than Swine Flu Itself & Will Not Give It To His Kids
☀ Dr Oz Will Propagandize For H1N1 Vaccine But He Wont Give It To His Kids
☀ Government Scientists Hide Vaccine/Autism Link
☀ SAY NO TO THE VACCINE by trillion
☀ Doctors speak out about H1N1 VACCINE DANGERS
☀ Bill Gates Admits That Vaccines Are Use Used For DEPOPULATION, Not For Making People Healthy
☀ Bill Gates, " Vaccinate to Depopulate": His Logic Explained
☀ Bill Gates Confronted on Eugenics by We Are Change
☀ Fuck The New World Order
★ မြန်မာဆိုတာ မင်းမမေ့နဲ့ ★
Looks very interesting.I am sure to visit again. Visit us back too: http://motors.com.mm/?utm_campaign=mot_mm_lb_blog_gverano&utm_source=mot_lb_blog&utm_medium=lb_blog
Hi, Inspiring and Interesting blog you have here... It would be my pleasure if you visit my website too. Here's the link